၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ -၃ – Pann Satt Lann Books
စာအုပ်နှင့်ပက်သက်ပြီး အမှာစာတွင် ဆရာရဲမြလွင်မှ
အတွဲ (၃)တွင် သူတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမည်၊ ဘယ်လိုထင်မှတ်မထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့ရမည်စသည့်တို့ကို သိရှိပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကမ္ဘာထဲသို့ဆွဲငင်ခေါ်ဆောင်သွားမည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်….။
ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးမူရကာမိ၏ အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း ၇၉ခန်း စာ မျက်နှာပေါင်း ၁၆၆၇မျက်နှာပါသော 1Q84 ဆိုသော ဝတ္တုကြီး၏ အတွဲ ၃တွဲစလုံးအား ၇လအတွင်း ပြီးဆုံးသည်အထိပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် …. ဟု စာရေးဆရာမှ အမှာစကားတွင် ပီတိစကားလေး ပြောကြားထားပါတယ်။
ကိုနေမန်း စာပေ၊ 2020 မတ်လ
1.2.2022 နေ့မှစတင်၍ မူရင်းထုတ်ဝေတိုက်မှ ကျပ် 12000 စာအုပ်စျေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
“၀မ်းကျူအိတ်ဖိုး အတွဲ -၃” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply